Conversica: Fifandraisana, fidirana, fikolokoloana ary fahaizana mampiasa Mpanampy AI | Martech Zone
Talata, Desambra 12, 2017 Zoma, Desambra 15, 2017 Douglas Karr
Conversica dia manome mpanampy amin'ny varotra mandeha ho azy ampiasain'ny rindrambaiko fitadiavana artifisialy. Ny mpanampy dia miasa toy ny mpanampy amin'ny varotra olombelona ihany, manatratra ny tsirairay amin'ny fitarihanao sy manao ny tsirairay amin'izy ireo amin'ny resadresaka ifanaovan'olombelona. Tian'ny olona izany satria ny mpanampy dia olona, ​​sariaka ary mahay mandray olona, ​​mampifandray azy ireo haingana amin'ny olombelona afaka manampy.
Ao amin'ny lohataona AI isika. Heveriko fa isaky ny orinasa, ny revolisiona amin'ny siansa angon-drakitra dia hanova tanteraka ny fomba fitantananay ny orinasantsika satria hanana solosaina manampy anay amin'ny fomba fifandraisantsika amin'ireo mpanjifantsika izahay. Tale jeneralin'ny Salesforce Marc Benioff
Ny mpanampy dia mifandray ary mahafeno ny tari-dalana rehetra mba hahafahan'ny mpivarotra mifantoka amin'ny fivarotana fa tsy hikolokolo. Ity automatique ity dia ahafahana manaraka ny fironana tokana sy ny hevitra azo raisina.
Ahoana ny fomba fiasan'ny solontena iray mpivarotra herinaratra AI:
Mpanampy anao amin'ny varotra mandeha ho azy mampiditra ny mpanjifa raha vantany vao tonga ny firaka. Amin'ny salanisa, 35% amin'ny mpitarika rehetra no mamaly ny mpanampy amin'ny varotra mandeha ho azy. Ilay mpanampy amin'ny varotra mandeha ho azy mailaka hatrany hatrany mitarika, mikolokolo ny tsirairay ary manaitra ny mpiasan'ny varotrao rehefa miova ny fahalianana amin'ny fikasana hividy.
Mpanampy anao amin'ny varotra mandeha ho azy tadiavo hoe iza no mitarika antso ary mahazo ny isa tsara indrindra. Miaraka amin'ny rindrambaiko fitadiavana artifisialy ny mpanampy anao amin'ny varotra mandeha ho azy dia mamantatra ireo fitarika izay vonona handray anjara amin'ny fizotry ny varotra ary mahazo ny laharana finday tsara indrindra sy fotoana tsara indrindra hiantsoana ny mpivarotra. Amin'ny salanisa, 35 isan-jaton'ny fitarihana no manome nomeraon-telefaona fanampiny ho an'ny mpanampy amin'ny varotra mandeha ho azy, mazàna telefaona finday. Ny tena zava-dehibe indrindra, rehefa miantso ny mpiasao varotra dia miandry ny antson'izy ireo ny mpitarika.
Mpanampy anao amin'ny varotra mandeha ho azy manaova filanjana bara sy mivarotra. Ny mpanampy anao amin'ny varotra mandeha ho azy dia afaka mahita fotoana fivarotana vaovao ihany koa amin'ny fitarihana tsy mitombina, mampitombo ny varotra ary mahazo sanda bebe kokoa amin'ny fitarihanao efa misy. Efa ho 60% ny fitarihana teknolojia AI an'ny Conversica no mbola eo an-tsena. Ny AI virtoaly mpanampy anao dia azo ampiasaina hivarotra vokatra hafa ihany koa ary hanangona valiny momba ny fahafaham-pon'ny mpanjifa.
Manatsara ny automatisation CRM marketing vahaolana. Ny mpanampy anao amin'ny varotra mandeha ho azy dia azo ampiasaina hanatsarana ny kalitaon'ny fitarihana sy hamantarana tsara kokoa ny fahafaha-mivarotra amin'ny fitarihana noforonin'ny fanentanana fitakiana fangatahana miaraka amin'ny fitaovana mandeha ho azy toy ny Pardot, Marketo na Eloqua.
Ny tombontsoa azo avy amin'ny solontena iray mpivarotra herinaratra AI dia:
Afaho ny solo-tena ho an'ny tena fivarotana - Ny mpanampy amin'ny varotra mandeha ho azy dia manasaraka ny fitarihana tsara amin'ireo maty, noho izany dia tsy miresaka afa-tsy amin'ireo prospecta te-hiresaka amin'izy ireo ny mpivarotra.
Araho ny firaka tsirairay - Mihoatra lavitra ny vokatra aterak'i Conversica amin'ny ramanavy ho an'ny solo-varotrao - miaraka amin'ny fitarihana vaovao sy taloha - ary amin'izany dia mampitombo ny isan'ny fifanarahana mihidy izy ireo.
Raiso ny valin-teny marina - Tena mora hatonina ny mpanampy anao, hany ka somary milamina kokoa sy mahatoky kokoa ny valin-tenin'izy ireo noho ny mety ho fiarahana amin'ny a mpivarotra.
Angony ny fitsikilovana momba ny asa aman-draharaha mitsikera - Tsy vitan'ny hoe mamaly mora fotsiny ny Prospect fa mizara fampahalalana mitsikera toa ny nomeraon-telefaona, fotoana tsara hiantsoana ary fikasana hividy.
Hatsarao ny fizotry ny varotrao - Ny mpanampy ny varotrao dia manohy manatratra ny vinavinany aorian'ny nanolorany tena tamin'ny mpivarotra - mba hanomezana fahafaham-po ny fitantanana sy ny fahafaham-pon'ny mpanjifa.
Manapaha mpanampy amin'ny varotra voaofana tanteraka - Tonga voaofana tanteraka, manana antony feno ary efa niomana tamin'ny traikefa azo avy amin'ny resadresaka mpanjifa an-tapitrisany ny mpanampy ny varotrao.
Andramo maimaimpoana i Conversica Jereo ny Demo Conversica mivantana
Tags: aiai mpanampyai virtoaly mpanampyai mpanampy varotra virtoalyfahaizana artifisialyConversicaanaty fiaraeloquamarketopardotvirtoaly mpanampympanampy varotra virtoalyekipa fivarotana virtoaly